ILufthansa igqiba ngempumelelo ukugqitywa kokonyuswa kwemali eyinkunzi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » ILufthansa igqiba ngempumelelo ukugqitywa kokonyuswa kwemali eyinkunzi
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • Utyalo mali • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
I-Deutsche Lufthansa AG ihlawule ngokupheleleyo isixa se-1.5 yeebhiliyoni zeerandi ethathwe kuThatho-nxaxheba oluThuleyo lweNgxowa-mali yoQinisekiso lwezoqoqosho kwiFederal Republic yaseJamani (ESF).
Ukunyuswa kwemali eyinkunzi eLufthansa kugqitywe ngempumelelo - izabelo ezitsha ziyathengiswa ukusukela namhlanje.
Ingeniso yokunyuka kwemali eyinkunzi ngokuthe ngqo ekubuyiselweni kwemali yozinzo kwiNgxowa-mali yoQinisekiso lwezoQoqo eJamani (ESF).
Intlawulo epheleleyo kunye nokucinywa kwe-ESF yoThatho-nxaxheba oluThuleyo mna no-II bacwangcise phambi kokuphela konyaka.
Ngokugqitywa kwanamhlanje konyuso lwenkunzi Deutsche Lufthansa AG ubuyise ngokupheleleyo isixa se-1.5 seebhiliyoni zeerandi esivela kuThatho-nxaxheba oluThuleyo I lwe INgxowa-mali yoQinisekiso lwezoqoqosho kwiFederal Republic of Germany (ESF). Ngale nto, iDeutsche Lufthansa AG ixazulule eyona ndawo iphambili yamanyathelo okuzinzisa okwangoku I-ESF. Intlawulo yenziwe ngokukhawuleza ngaphambili kunokuba bebecwangcisile.
UCarsten Spohr, u-CEO we-Deutsche Lufthansa AG
Ingeniso epheleleyo yonyuso lwenkunzi ifikelele kwi-2.162 yezigidi zeerandi. Izabelo ezitsha ziyathengiswa kwiFrankfurt Stock Exchange ukusukela namhlanje. Ukunyuswa kwemali ke kugqityiwe.
UCarsten Spohr, CEO we Deutsche Lufthansa AG uthi:
“Siyavuya kakhulu Deutsche Lufthansa AG yazinziswa ngemali yerhafu kwelona xesha linzima. Oku kuye kwenza ukuba kugcinwe imisebenzi engaphezulu kwe-100,000 kwaye ikhuselekile kwikamva. Namhlanje, sigcina isithembiso sethu kwaye sihlawula inxenye enkulu yemali yozinzo kwangaphambi kokuba kulindelwe. Siya siqinisekile ngekamva. Amazwe amaninzi ayavula imida yawo, kwaye imfuno yohambo lomoya, ngakumbi kubahambi beshishini, ikhula mihla le. Nangona kunjalo, imeko-bume yeenqwelo moya ihlala ingumngeni. Kungenxa yoko le nto singaguquguquki ekuqhubekekeni nokutshintsha kwethu. Injongo yethu ihlala ingatshintshanga: iQela laseLufthansa liza kuqhubeka nokukhusela isikhundla salo phakathi kwamaqela amahlanu aphambili eenqwelo moya. ”
Ukulandela ukuhlawulwa kwanamhlanje koThatho-nxaxheba oluThuleyo I, iNkampani ikwanenjongo yokuhlawula ngokupheleleyo iNxaxheba ethe cwaka II ye-1 yezigidigidi zeerandi ngaphambi kokuphela kuka-2021 kunye nokupheliswa kwenxalenye engasetyenziswanga yoThatho-nxaxheba oluThuleyo nam phambi kokuphela kuka-2021. I-1 yezigidigidi zeerandi sele ihlawulwe kwangoko kunokuba bekucwangcisiwe (ngoFebruwari 2021). I-ESF, ngoku ephethe i-14.09% yemali eyabelweyo, izibophelele ukuba ayizukuthengisa naziphi na izabelo kwinkampani kwiinyanga ezintandathu ezilandela ukugqitywa kokonyuswa kwemali eyinkunzi. Nangona kunjalo, ukuthengiswa kwesibambiso kuya kugqitywa kungagqithanga iinyanga ezingama-24 emva kokugqitywa kokunyuswa kwemali eyinkunzi, ngaphandle kokuba iNkampani ibuyisele iNxaxheba ethe cwaka I no-II njengoko bekucetyiwe nokuba iimfuno zekhontrakthi ziyafezekiswa.